သင်္ကြန်အတွက် တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးစေမယ့် မျက်ဝန်းခြယ်သမှုလေးမျိုး
11 Apr 2018 . 12:35 PM
သင်္ကြန်လည်မယ်ဆိုရင် မျက်ဝန်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြယ်သမှုတွေအများကြီးမလိုပေမယ့် မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ရတာကြိုက်တဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ကောင်မလေးတွေအတွက် စမ်းကြည့်သင့်တဲ့မျက်ဝန်းခြယ်သမှုလေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မဏ္ဍပ်ထိုင်ရေပက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ညနေဘက် ညဘက်အပြင်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြယ်သနိုင်သလို ရုံးဖွင့်လို့ရုံးတက်ချိန်တွေမှာတောင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လက်လက်လေး လှနေစေမယ့် ခြယ်သမှုမျိုးတွေပါ။ အားလုံးပဲ စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်နော်။
A Light Wash ofaSingle Color
ဒီခြယ်သနည်းကတော့ Eye Shadow စသုံးပြီးခြယ်သခါစလူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီခြယ်သမှုက နေ့စဉ်ထသွားထလာပြင်ဆင်မှုအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Creamy Shadow ကို သုံးစေချင်ပါတယ်။ မျက်တောင်မွေးရင်းနားကပ်ပြီး ဘရပ်ရှ် ဒါမှမဟုတ် Applicator လေးသုံးပြီးခြယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ လက်သူကြွယ်လေးနဲ့ဖြန့်လိမ်းပါ။ မျက်ခွံအစွန်းထိဆွဲဖြန့်သွားရပါမယ်။ အဓိကက Shadow နည်းနည်းပုံပြီး များများ Blend ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Shadow ကို Powder Type သုံးချင်သေးတယ်ဆိုရင် ဘရပ်ရ်ှလေးသုံးပြီး ထပ်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်ကိုတော့ ကြိုက်ရာတင်ပါ။ ဘရပ်ရှ် Handle အဖျားလေးကနေကိုင်ပြီး ဖွဖွနဲ့မြန်မြန်ခြယ်ပေးရမှာပါ။ ကာလာကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့အနေအထားအထိ အနည်းအများညှိသုံးပေးပါ။ ဒီ Blend ပုံမျိူးက အရမ်းရိုးရှင်းပေမယ့် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အသပ်ရပ်ဆုံးသော Makeup Look ကိုရရှိစေမှာပါ။
မျက်ဝန်းကို ပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးနဲ့ထင်းနေစေချင်ရင် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Basic Eyeshadow ခြယ်သပြီးချိန်မှာ Lip Gloss ပြောင်ပြောင်လေးကို အပြီးသတ်တင်ပေးဖို့ပါပဲ။ လိမ်းခြယ်နည်းက လွယ်လွယ်လေးပါ။ ဘရပ်ရ်ှလေးနဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Shadow အရောင်ကို ဖွဖွတင်ပါ။ ပြီးရင်တော့ လက်သူကြွယ်သုံးပြီး မျက်ခွံအလယ်နေရာမှာ Gloss လေးတင်ပြီးဖြန့်ပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်ဖို့အတွက် Lip Gloss တစ်ခုတည်းသုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ Balm ဒါမှမဟုတ် အပြောင်ပါတဲ့ Highlighter လေးတွေကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိ အာရှနဲ့လည်းလိုက်ဖက်မယ့် ခြယ်သမှုအတွက် တိပ်၊ Concealer ၊ Eyeliner နဲ့ ဘရပ်ရ်ှတွေပဲလိုပါတယ်။ ဒီ Look ကိုရဖို့အတွက် အခြေခံအကျဆုံး Shadow ခြယ်သနည်းအတိုင်းပဲ Color လေးတွေ Blend ပါ။ ပြီးရင်တော့ သူ့ထက်ပိုရင့်တဲ့ ကာလာကိုဘရပ်ရ်ှသုံးပြီး Layer ပါးပါးထပ်လိမ်းပါ။ Concealer ကို ဘရပ်ရ်ှသေးသေးလေးသုံးပြီး မျက်ရစ်တစ်လျှောက်လိမ်းပါ။ ပြီးရင်တော့ အရေးအကြီးဆုံးအဆင့်လာပါပြီ။ ထောင့်ချွန်းလေးရစေဖို့ တိပ်အကြည်လေးနဲ့အောက်မျက်တောင်နားကို ကပ်ပါ။ Cat Eye လိုချွန်းချွန်းလေးဖြစ်စေရပါမယ်။ လိုင်နာဘရပ်ရ်ှအသေးလေးနဲ့ တိပ်အစွန်းလေးမှာ အရောင်ရင့် Shadow ကိုထပ်ခြယ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ တိပ်လေးကိုဆွဲခွာပြီးအောက်မျက်ခမ်းနားမှာ အရောင်ရင့်ကိုဆက် Blend ဖို့ပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ မျက်ဝန်းအတွင်းထောင့်လေးကိုကာလာလင်းလင်းလေးခြယ်ပြီး မျက်တောင်တုလေးတပ်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ ပိုရှင်းလင်းသွားအောင် သူခြယ်သပုံလေးကို ကြည့်ပါနော်။
Beautiful @byjeannine Using the Soft Glam Palette & Malt Liquid Lipstick
A post shared by Anastasia Beverly Hills (@anastasiabeverlyhills) on Mar 7, 2018 at 2:02pm PST
လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီး အလှဆုံး Look ကိုရမယ့် ခြယ်သပုံလေးပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Eyeshadow အရောင် လက်လက်လေးကိုရွေးပါ။ မျက်ခွံအနှံ့ ဘရပ်ရ်ှသုံးပြီး လိမ်းပါ။ ပြီးရင်တော့ အောက်မျက်ခမ်းအနှံ့ခြယ်သပါမယ်။ Shimmer ၊ Highlighter လေးတွေကို မျက်ခွံအတွင်းဘက်အစွန်းကနေဘေးစွန်းအထိ ပါးပါးလေးခြယ်သပါ။ သွက်သွက်လေးနဲ့ပါးပါးလေးခြယ်သရမှာပါနော်။ ပြီးရင်တော့ EyeLiner Pencil နဲ့အနားကွပ်ပါ။ ဘေးစွန်းကိုနည်းနည်းလေးကော့တင်ပြီးဆိုးပါ။ ပြီးရင် မျက်တောင်ကော့ပါမယ်။ မျက်ခွံအပေါ်စွန်းကို Shimmer လေးနည်းနည်းတင်ပါ။ မျက်တောင်တုတပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တပ်လို့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးပါ တွဲပြီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။
MTHRSHP Sublime Bronze Ambition ⚡️⚡️⚡️ Revel inagilt trip of iconic illumination, captured inasexy soiree of fiery coppers, illicit charcoals, sensual golds, and carnal champagnes🖤🖤🖤 ALL3NEW SIX-PAN MTHRSHP Eye Palettes are now available at PATMcGRATH.COM ______________________________ #PMGHowTo #tutorial . —Pack ‘COPPERIZED’ pigment onto lid withaflat brush & diffuse edges —Apply ‘COPPERIZED’ pigment to lower lash line. —Define upper & lower lash line using ‘BRONZE STRUCK’ pigment onasmall brush 一Swipe ‘GOLD RUSH’ pigment onto lid withafinger —Define lash line using PermaGel Ultra Glide Eye Pencil in ‘BLITZ BROWN’ . —Highlight inner corner & brow bone with ‘GILT TRIP’ pigment —Apply mascara & false lashes
A post shared by Pat McGrath (@patmcgrathreal) on Mar 11, 2018 at 11:27am PDT
ကဲ…Makeup ပြင်ဆင်ရတာကြိုက်သူလေးတွေ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး အိမ်မှာပျင်းနေရင်လည်း ဒီ EyeMakeup Look တွေကိုလေ့ကျင့်ခြယ်သကြည့်လို့ရပါတယ်လို့။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စရာသင်္ကြန်နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
သင်ျကွနျအတှကျ တဈနတေ့ဈမြိုးမရိုးစမေယျ့ မကျြဝနျးခွယျသမှုလေးမြိုး
သင်ျကွနျလညျမယျဆိုရငျ မကျြဝနျးအတှကျပွငျဆငျခွယျသမှုတှအေမြားကွီးမလိုပမေယျ့ မိတျကပျပွငျဆငျရတာကွိုကျတဲ့ ဝါသနာပါတဲ့ကောငျမလေးတှအေတှကျ စမျးကွညျ့သငျ့တဲ့မကျြဝနျးခွယျသမှုလေးတှကေို မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ မဏ်ဍပျထိုငျရပေကျရငျပဲဖွဈဖွဈ ညနဘေကျ ညဘကျအပွငျထှကျရငျပဲဖွဈဖွဈခွယျသနိုငျသလို ရုံးဖှငျ့လို့ရုံးတကျခြိနျတှမှောတောငျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လကျလကျလေး လှနစေမေယျ့ ခွယျသမှုမြိုးတှပေါ။ အားလုံးပဲ စမျးကွညျ့နိုငျပါတယျနျော။
ဒီခွယျသနညျးကတော့ Eye shadow စသုံးပွီးခွယျသခါစလူတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးပါ။ ဒီခွယျသမှုက နစေ့ဉျထသှားထလာပွငျဆငျမှုအတှကျလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ ဒီနရောမှာတော့ Creamy Shadow ကို သုံးစခေငျြပါတယျ။ မကျြတောငျမှေးရငျးနားကပျပွီး ဘရပျရျှ ဒါမှမဟုတျ Applicator လေးသုံးပွီးခွယျလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ လကျသူကွှယျလေးနဲ့ဖွနျ့လိမျးပါ။ မကျြခှံအစှနျးထိဆှဲဖွနျ့သှားရပါမယျ။ အဓိကက Shadow နညျးနညျးပုံပွီး မြားမြား Blend ရမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ Shadow ကို Powder Type သုံးခငျြသေးတယျဆိုရငျ ဘရပျရျှလေးသုံးပွီး ထပျနိုငျပါတယျ။ အရောငျကိုတော့ ကွိုကျရာတငျပါ။ ဘရပျရျှ Handle အဖြားလေးကနကေိုငျပွီး ဖှဖှနဲ့မွနျမွနျခွယျပေးရမှာပါ။ ကာလာကို ကိုယျလိုခငျြတဲ့အနအေထားအထိ အနညျးအမြားညှိသုံးပေးပါ။ ဒီ Blend ပုံမြိူးက အရမျးရိုးရှငျးပမေယျ့ အခြိနျကုနျသကျသာပွီး အသပျရပျဆုံးသော Makeup Look ကိုရရှိစမှောပါ။
မကျြဝနျးကို ပွောငျပွောလကျလကျလေးနဲ့ထငျးနစေခေငျြရငျ လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့နညျးတဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ Basic Eyeshadow ခွယျသပွီးခြိနျမှာ Lip Gloss ပွောငျပွောငျလေးကို အပွီးသတျတငျပေးဖို့ပါပဲ။ လိမျးခွယျနညျးက လှယျလှယျလေးပါ။ ဘရပျရျှလေးနဲ့ ကိုယျနှဈသကျတဲ့ Shadow အရောငျကို ဖှဖှတငျပါ။ ပွီးရငျတော့ လကျသူကွှယျသုံးပွီး မကျြခှံအလယျနရောမှာ Gloss လေးတငျပွီးဖွနျ့ပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုပွောငျပွောငျလေးဖွဈဖို့အတှကျ Lip Gloss တဈခုတညျးသုံးနိုငျတာမဟုတျဘူးနျော။ Balm ဒါမှမဟုတျ အပွောငျပါတဲ့ Highlighter လေးတှကေိုလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။
ဆှဲဆောငျမှုလညျးရှိ အာရှနဲ့လညျးလိုကျဖကျမယျ့ ခွယျသမှုအတှကျ တိပျ၊ Concealer ၊ Eyeliner နဲ့ ဘရပျရျှတှပေဲလိုပါတယျ။ ဒီ Look ကိုရဖို့အတှကျ အခွခေံအကဆြုံး Shadow ခွယျသနညျးအတိုငျးပဲ Color လေးတှေ Blend ပါ။ ပွီးရငျတော့ သူ့ထကျပိုရငျ့တဲ့ ကာလာကိုဘရပျရျှသုံးပွီး Layer ပါးပါးထပျလိမျးပါ။ Concealer ကို ဘရပျရျှသေးသေးလေးသုံးပွီး မကျြရဈတဈလြှောကျလိမျးပါ။ ပွီးရငျတော့ အရေးအကွီးဆုံးအဆငျ့လာပါပွီ။ ထောငျ့ခြှနျးလေးရစဖေို့ တိပျအကွညျလေးနဲ့အောကျမကျြတောငျနားကို ကပျပါ။ Cat Eye လိုခြှနျးခြှနျးလေးဖွဈစရေပါမယျ။ လိုငျနာဘရပျရျှအသေးလေးနဲ့ တိပျအစှနျးလေးမှာ အရောငျရငျ့ Shadow ကိုထပျခွယျပါ။ ပွီးရငျတော့ တိပျလေးကိုဆှဲခှာပွီးအောကျမကျြခမျးနားမှာ အရောငျရငျ့ကိုဆကျ Blend ဖို့ပါပဲ။ ပွီးရငျတော့ မကျြဝနျးအတှငျးထောငျ့လေးကိုကာလာလငျးလငျးလေးခွယျပွီး မကျြတောငျတုလေးတပျလိုကျဖို့ပါပဲ။ ပိုရှငျးလငျးသှားအောငျ သူခွယျသပုံလေးကို ကွညျ့ပါနျော။
လှယျကူမွနျဆနျပွီး အလှဆုံး Look ကိုရမယျ့ ခွယျသပုံလေးပါ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ Eyeshadow အရောငျ လကျလကျလေးကိုရှေးပါ။ မကျြခှံအနှံ့ ဘရပျရျှသုံးပွီး လိမျးပါ။ ပွီးရငျတော့ အောကျမကျြခမျးအနှံ့ခွယျသပါမယျ။ Shimmer ၊ Highlighter လေးတှကေို မကျြခှံအတှငျးဘကျအစှနျးကနဘေေးစှနျးအထိ ပါးပါးလေးခွယျသပါ။ သှကျသှကျလေးနဲ့ပါးပါးလေးခွယျသရမှာပါနျော။ ပွီးရငျတော့ EyeLiner Pencil နဲ့အနားကှပျပါ။ ဘေးစှနျးကိုနညျးနညျးလေးကော့တငျပွီးဆိုးပါ။ ပွီးရငျ မကျြတောငျကော့ပါမယျ။ မကျြခှံအပျေါစှနျးကို Shimmer လေးနညျးနညျးတငျပါ။ မကျြတောငျတုတပျခငျြတယျဆိုရငျ တပျလို့ရပါတယျ။ ဗီဒီယိုလေးပါ တှဲပွီးဖျောပွလိုကျပါတယျနျော။
ကဲ…Makeup ပွငျဆငျရတာကွိုကျသူလေးတှေ အိမျတှငျးအောငျးပွီး အိမျမှာပငျြးနရေငျလညျး ဒီ EyeMakeup Look တှကေိုလကေ့ငျြ့ခွယျသကွညျ့လို့ရပါတယျလို့။ အားလုံးပဲ ပြျောရှငျစရာသင်ျကွနျနရေ့ကျတှကေိုပိုငျဆိုငျကွပါစေ။